(၂၂) ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ်အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » (၂၂) ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ်အလှူ
(၂၂) ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ်အလှူ
Posted by etone on May 14, 2014 in Community & Society, Education, How To.., Society & Lifestyle | 13 comments
ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အလှူအဖြစ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အလှူငွေ ၃၄၃,၀၀၀/-ကျပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ ၁၀၀,၀၀၀/-ကျပ်ဖိုး စုစုပေါင်း ၄၄၃,၀၀၀/-ကျပ် (လေးသိန်း လေးသောင်း သုံးထောင်ကျပ်)ကို ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ စိမ်းလန်းမြေ မိဘမဲ့ ပရဟိတဂေဟာသို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းပြီးစီးခဲ့ပါတယ်
ဒီတခါ (၂၂)ကြိမ်မြောက် အလှူ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းလေးက ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအမျိုးစားထဲကမဟုတ်ပဲ လူမှု ၀န်ထမ်း အသိမှတ်ပြု လူငယ်ဖွ့ံဖြိုးရေး မိဘမဲ့ ဂေဟာ တစ်ခုပါ ။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ ထိုင်ဝမ်လူမျိုး MR.CHOUလို့ သိရပြီး ၂၀၀၄ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဂေဟာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
၂၀၀၇ခုနှစ်မှာမှ စပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန အသိမှတ်ပြု လူငယ်ဖွ့ံဖြိုးရေး ဂေဟာ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ စတင်တည်ထောင် ခဲ့သူ MR.CHOUဆိုသူကတော့ တွံ့ တေး မင်္ဂလာ ပရဟိတကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင် လှူ ဒါန်းထားရင်း သီးခြားဂေဟာ တည်ထောင်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာကြောင့် ယခု စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ ဂေဟာလေးကို တည်ထောင်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် တချို့သော ပရဟိတ ဂေဟာတွေ ၊ ဘကကျောင်းတွေမှာလည်း MR.CHOU လှူထားတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေ ရှိကျောင်းလည်း သိခဲ့ရပါသေးတယ် ။
မြန်မာ့ စိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ ဖြိုးရေ ဂေဟာ စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ နှစ်မှာ ကျောင်းသား ၁၆ ဦးသာ ရှိခဲ့ပြီး ၊ တွံတေး မင်္ဂလာကျောင်းမှ ကျောင်းသားများကို လက်လွှဲယူပြီး စတင်လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ယခုစာသင်နှစ်အတွက်တော့ ကျောင်းသား ၄၂ယောက် ( ကျား ၂၆ ၊ မ ၁၆ ယောက်)ကို လက်ခံထားလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ် ။ ကျောင်းသားအများစုမှာ မူလတန်းကျောင်းသားများဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ဝေယျာဝစ္စကို ဆရာမ ၅ယောက်နှင့် အတန်းကြီးကျောင်းသားများမှလည်း ဆင့်ကဲတာဝန်ယူပေးထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်မှီ ကျောင်းသားများကိုတော့ အနီးနား အစိုးရကျောင်းများသို့ပို့ပြီး ပညာသင်ပေးကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ကလေးများ ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလည်း ဆေးပေးခန်းထားရှိပြီး volunteer ဆရာဝန်များ ၊သူနာပြုများက ရံဖန်ရံခါ လာရောက် အကူညီပေးလျှက်ရှိကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
မိဘမဲ့ ကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စိတ်မကောင်းစရာ ဇာတ်လမ်းကိုယ်စီရှိကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပြီး ဒီလိုကလေးတွေအတွက် စားဝတ်နေရေး ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးသာမကပဲ စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်ရေးအတွက်ပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ခိုကိုးရာမဲ့ ကလေးများ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် တဖက်တလမ်းကနေ ကူညီအားဖြည့် လှူဒါန်းလိုပါလျှင် အောက်ပါ လိပ်စာ အတိုင်း သွားရောက် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော် ။
ငါးဆူတောင် ကျေးရွာ ၊ လှည်းကူးမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ။
ရွာထဲက အမျိုးချစ်တွေရှိတယ်ဆိုလို …. ကိုယ့်အမျိုးနွယ်ထဲက ကလေးတွေ စာတတ်မြောက်ဖို့ အလှူထည့်လိုပါလျှင် အောက်ပါ အီးမေးလ် လိပ်စာများကိုလည်း ဆက်သွယ်ပြီးစာပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော် …
၂၂ ကြိမ်မြောက် ပညာသင်အထောက်ပံ့အလှူငွေ
ဒီလို ကလေးတွေအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ့် ကျောင်းတွေ အများကြီးရှိသင့်ပါတယ် ။
စာရေး ကိရိယာ အလှူ
ကျနော်လည်း ဟိုတလောက မိဘမဲ့ဂေဟာတစ်ခုဆီ ရောက်ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီက ကလေးတွေရဲ့ ဘဝတွေဟာ
အဲ့ဒိကအပြန် စာတစ်ပုဒ်တောင် ချရေးဖြစ်သေးတယ်
မွန်မြတ်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်နိုင်နေတဲ့
ဒီအဖွဲ့ ကို လေးစား ချီးကျူး
ဟေ…ဟေ့… အပေါ်ဆုံးပုံမှာ…သာမီးလက် ပါတယ်….။
ဂုဏ်ယူပါတယ်..ဒါဇင်ပလပ်စ် ရေ….ဒီလို နှမ်းလေးတွေများလာမှ ဆီဖြစ်တော့မပေါ့ဗျာ…
အစ်မတို့တော့ အဝေးလှမ်းမလှူဖြစ်ပဲ အနီးကပိုဆင်းရဲတာတွေလှူဖြစ်နေသေးတယ်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာအတွက်ခွန်အားတို့ပြည့်ဝကြပါစေ
ကလေးတွေက သနား စရာ ချစ်စရာ။
သာဒု .. သာဒု .. သာဒု ပါဗျို့ …
၂၂ ကြိမ်ဆိုတော့ ၂၂ လ ပေါ့နော် …
၁၂ လမှာ တစ်နှစ် ဆိုတော့ …
အင်း .. ၂ နှစ် ပြည့်ခါနီးပြီပေါ့ ……
၂၂ကြိမ်မြောက် ဆိုတော့ ၂နှစ် နီးပါးတောင် ရှိတော့မယ်။
ဒီလောက် ရေရှည်ကာလ ကို စည်းစည်းလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင် အတူတွဲ ကူညီ နေကြဆဲ လူငယ်လေးတွေ အတွက် တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သာဓု လဲ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပါတယ်။
(မဟုတ်ရင် ၃ ခါ ရေးနေရမစိုးလို့) ;-)
PS – အပေါ်က လက် လေးတွေ ပုံ idea ကို သဘောကျတယ်။ :-)
နောက်တစ်ခါ ဒါဇင်ပလပ်လိုဂိုပြင်မယ်ဆိုရင် အဲ့လက်ပုံလေးဆွဲမလားစဉ်းစားမိတယ်…
ပိုက်ဆံရှိရင် လှူ လို့ရဒါများ.. သောက်ကျီးတောက်ကြယ်….
အရက်ဖိုးထဲကလှူတာ… ငါလိုလူ ဇမ္ဗူမှာရှိသေးရဲ့လားကွ…
(ကြောင်နှစ်ကောင်ပြာသိုလမှာ ကိုက်နေတယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့…)
တစ်လထက် တစ်လ အလှူတော်ငွေ
( အဖွဲ့ဝင်၊ အလှူရှင် တွေတိုးလာလို့)
၀မ်းသာ ပီတိ နဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…
နာရေးထားတဲ့ ကမန့် ဘယ်နားရောက်သွားပါလိမ့်။ ပိတီဖြစ်တယ်တို့ ဂရုနာသက်မိတယ်တို့ ရေးထားတာလေ.။